कसरी लेख्न: "पूरा" वा "पूरा"?
रूसी भाषा - सबैभन्दा कठिन हिज्जे एक। नियम सेट, तिनीहरूलाई अपवाद र मात्र होइन छोराछोरीलाई तर पनि वयस्क हिज्जे मा कठिनाइ छ भन्ने तथ्यलाई गर्न परिणाम आधारमा नै शब्द विभिन्न हिज्जे। सबैभन्दा गल्ती गर्ने क्रिया मा छन्, कि -tsya र -tsya अन्त्य विशेष गरी ती। लेखन बारे एक नरम साइन , धेरै प्रश्न उठ्छन्। उदाहरणका लागि, धेरै मानिसहरू "पूरा" कसरी वा "पूरा" रुचि हो।
यी शब्दहरू लेख्दा किन छ गाह्रो बनाउँछ
आधुनिक प्रत्यय Xia असामान्य bit। उहाँले एउटा मात्र खडा भनेर अघि र पछि छैन। यो मान्छे समस्या हुन्छ। उहाँले जो पछि क्रिया एकिकृत एक शब्द, हुन प्रयोग व्याख्या गर्नुपर्छ। र "धो" - जसको अर्थ "आफूलाई धुन", र "पूरा" - "। प्रत्येक अन्य पूरा गर्न" यो -tsya र यस्तो -tsya वाक्यांश सही प्रश्नको जवाफ मदत गर्नेछ क्रिया प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता छ: "? कसरी लेख्न - पूरा वा पूरा गर्न"
वास्तविक प्रश्न दुवै विकल्प सही छन् किनभने, एकदम सही छैन। र लेखन मान र निर्भर अभिव्यक्ति प्रकारका। उदाहरणका लागि, वाक्यमा नरम साइन आवश्यक छ "हामी पूरा गर्न आवश्यक", र संयोजन मा, "त्यो उनको भोलि संग पूरा" - आवश्यकता छैन। यी दुई अवस्थामा बीच भेद कसरी जान्न, यो नियम थाहा आवश्यक छ।
हिज्जे -tsya र -tsya
शब्दहरू फारम आधारमा नरम साइन आवश्यक वा। को 3rd व्यक्तिमा क्रिया वर्तमान र भविष्य समय Singular लेखिएको छैन। यी शब्दहरू "के" प्रश्न जवाफ, र पहिले नै यो कुनै नरम साइन छ कि स्पष्ट छ। को क्रिया को प्रश्नको जवाफ भने "के गर्न?" वा "के गर्न?" - यो infinitive फारममा खडा। यस मामला मा, नरम साइन सधैं लेखिएको छ। operedelit, के फारम को क्रिया, यो आवश्यक छ गर्नुपर्छ यो भर पर्छ के शब्द द्वारा, पत्ता लगाउन, र प्रश्न उठाउनु गर्न। प्रश्न सक्दैनन् भने हुन, को 3rd व्यक्ति मा क्रिया र Xia अगाडि नरम साइन लिखित छैन। उदाहरणका लागि, "सिक्न सधैं उपयोगी छ" - शब्द "उपयोगी" यो Xia अगाडि छ।
"एस" आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न सजिलो तरिका
प्रश्न अफ्ठ्यारो गराउँछ गर्नेहरूको, एक "मिलन" वा "भेला" कसरी लेख्न, धेरै केही मानिसहरू चाँडै संयोजन को अर्थ, को क्रिया फारम निर्धारण र नियम सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, एक चेक लेख्न एक सजिलो तरिका छैन। तपाईं अन्त अघि शब्द पूरा अघि, उहाँलाई प्रश्न राखे। यसबारे नरम साइन सुने गर्न सकिन्छ भने एक शब्द उसलाई पनि, नरम साइन बिना प्रश्न, त्यसपछि शब्द उसलाई बिना हुनेछ भने लेख्नुहोस्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो धेरै सरल छ। "भेट" - "उहाँले के थियो?" - नरम साइन बिना लिखित। तर "के गर्न?" - "भेट्नुहोस्" उसलाई पहिले नै छ। तपाईं ध्यान मा हेर्न आवश्यक समाप्त क्रिया प्रत्यय Xia र मानसिक छोड्न। "के?" - "बनाउन के?" "पूरा", तर - "पूरा"। एउटै कुरा हो, तर प्रत्यय बिना Xia कुनै एक कठिनाइ उत्पन्न गर्दैन छ।
आकृति "पूरा हुनेछ"
यो शब्द शब्द "उहाँले", "त्यो", "यो" संग नरम साइन बिना प्रयोग गरिन्छ। अर्थ भित्र यो कार्य कहिलेकाँही हुनेछ भनेर सङ्केत गर्छ। "उहाँले, भोलि हाम्रो साथ पूरा हुनेछ" "तिनले उहाँलाई एक घण्टा पछि पूरा हुनेछ।" यो शब्द पूरा गर्न आवश्यक छ, जो एक विशेष कार्य संकेत गर्छ। तर यस्तै आकार, तर त्रुटिपूर्ण कार्य सधैं नरम साइन बिना लेखिएको छ। उदाहरणका लागि, "उहाँले अन्य संग पूरा गर्दछ।"
यस प्रश्नको जवाफ जब यो शब्द एक नरम चिन्ह लेखिएको छ "के?" यो कार्य अझै पूरा गरिएको छैन र यो कि पूरा अज्ञात छ सङ्केत गर्छ। उदाहरणका लागि, "त्यो उनको पूरा गर्न तयार छ" हामी, भेट्न आवश्यक "।" को विकल्प प्रश्न जाँच गर्न र मानसिक Xia हटाउन। र हुनेछ: हामी के गर्न आवश्यक? - मिलन।
अनुभव यो त्रुटि भन्दा साधारण छ कि देखाइएको छ। केही कारणले, मान्छे पनि साक्षर, गाह्रो तुरुन्तै, आवश्यक नरम साइन वा शब्दहरू "मिलन" वा "भेला" निर्धारण गर्न छ। सायद, तिनीहरूले यो असामान्य प्रत्यय Xia, एक शब्द हुन प्रयोग गर्ने द्वारा भ्रमित छन्।
तुलनात्मक र सर्वोत्कृष्ट विशेषण
एक विशेषण के हो? बोलीको एक भागको रूपमा विशेषण
रूसी भाषा: असंगत आवेदन भवन प्रस्ताव उल्लङ्घन
शब्द आवाजहरू को संयोजन। धेरै ध्वनि संयोजन
आर्य - यो के हो। यो सज्जन हुनुहुन्छ? को आर्य एक संक्षिप्त इतिहास
घाँटी: पुरानो नाम। पुरानो शब्दावली: पुर्जा को नाम
ल्याप्टप कसरी तात्दै वा मनपर्ने प्रविधी बच्न ठंडा गर्छ?
घरमा मह मालिश: उपकरण प्रदर्शन
निक्षेप को पूँजीकरण र जम्मा मा ब्याज को पूँजीकरण के हो?
Spokes हुड कसरी बाँध गर्न? सजिलो तरिका
खेलौना गुडिया - बाल्यकाल को एक प्रतीक
"Lapino" - क्लिनिकल अस्पताल। ठेगाना, समीक्षा
"NPK": संरचना। "NPK": प्रयोगको लागि निर्देशन
होटल "शीर्ष Seliger": कोठा र समीक्षा postoyateltsev विवरण
इजमेलोमा ख्रीष्टको क्रान्तिको चर्चमा
चाहे रहस्य हो - वालियनले ट्याब्लेटमा (अनुप्रयोगमा निर्देशन)
"बहु - ट्याबहरू बच्चाहरु"
कसरी भाइरस तपाईंको कम्प्युटर सुरक्षा गर्न स्वचालित हटाउन